Arsene Wenger Oo Tallo Muhiim Ah U Soo Jeediyay Garsoorayaasha Premier League Ee Jawo Wareerka Ku Abuura VAR. - Gool24.Net
Arsene Wenger Oo Tallo Muhiim Ah U Soo Jeediyay Garsoorayaasha Premier League Ee Jawo Wareerka Ku Abuura VAR.
Tababarihii hore ee kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa tallo muhiim ah u soo jeediyay garsoorayaasha horyaalka Premier league taas oo xidhiidh la leh muuqaal caawiyaha garsoorka VAR.
Arsene Wenger oo hadda xil muhiim ah ka haya xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA ayaa garsoorayaasha Premier league ku booriyay in ay waqti badan ku bixiyaan istimaalka shaashada VAR ee garoomada dhinacooda la dhigo.
Xili ciyaareedkii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League laga adeegsanayo aalada VAR ee qaladaadka kubbada cagta lagu saxo ayaa muran ka dhaliyay Premier League kadib xaalado aan laysku fahmin sababta dhabta ah ee go’aamo loo badalay.
Arsene Wenger oo 70 sano jir ah ayaa aaminsan in dhibaatada VAR ee horyaalka Premier League tahay in aan la adeegsan shaashada TV-ga ee la dhigo garoomada si garsooraha ciyaarta dhex dhexaadinayaa uu muuqaalka dib ugu daawan karo si uu go’aankiisa u badalo ama uu u saxo.
Ilaa hadda waxaa Premeir League laga soo ciyaaray 140 kulan oo horyaalka ah, laakiin wali may dhicin in garsoore Premier League ka hawl galaa uu adeegsado shaashada garoonka dhiniciisa taala si uu go’aankiisa u saxo ama u badalo, wuxuuna Wenger ku dooday in ay dhibaatadu arintan tahay.
Arsene Wenger oo talo siinaya garsoorka Premier League ee uu muddada 22ka sano ahayd ka soo dhex shaqeeyay ayaa yidhi: “Garsooruhu waxa uu u baahan yahay shaashad (TV) si uu uga hubiyo haddii uu saxsan yahay ama uu qaldan yahay”.
Arsene Wenger oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Aniga ahaan waa waxa ugu muhiimsan ee walwalka ah.Garsoorayaashu garoonka ayay dhex joogayaan, sababtoo ah waxay leeyihiin khibrada waxayna qabaan kalsooni”.
Wenger ayaa ku dooday in VAR uu saamayn fiican u yeeshay si ayna dadku u aaminsanayn wuxuuna yidhi: “Daacad ahaantii waxaan anigu aaminsanahay in uu si ka fiican u shaqeeyay sida ay dadku ka malaynayaan, sababtoo ah waxaan ka hor markhaati ka soo noqday go’aamo xun”.
“Ayaynaan ilaawi in uu sanadkii ugu horeeyay yahay, sidaa daraadeed, dabcan wax walba sax ma aha. Dib u sixitaanku wuu iman doonaa, waxaa waajib kugu ah in aad dadka wax ka barto VAR si uu waqtiga ku haboon u soo faro galiyo” ayuu Wenger hadalkiisa raaciyay.
Arsene Wenger oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Ayaynaan hilmaamin in uu yahay caawiye muuqaal oo garsooraha ah, sidaa daraadeed, VAR ma aha ka go’aamada samaynaya, laakiin waa kuwa garsooraha ka caawinaya go’aanka saxda ah”.